February 2017 - Sawirrotv
Shirkii Qaran ee Abaaraha Dalka (VIDEO)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Faramaajo), ayaa ku dhawaaqay in abaaraha ka jira dalka ay yihiin musiibo qaran oo u baahan in si degdeg ah looga jawaabo. Ugu dambeyntii , Madaxweynaha ayaa si joogta ah ula socon doona xaaladaha abaaraha, si gurmadka loo fidinayo dadka Soomaaliyeed uu u noqdo mid gaaray meelihii …
Madaxweyne Farmaajo oo ku Dhawaaqay in Abaaraha ka Jira Dalka ay Yihiin Masiibo Qaran (VIDEO)
February 28, 2017 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Faramaajo), ayaa ku dhawaaqay in abaaraha ka jira dalka ay yihiin musiibo qaran oo u baahan in si degdeg ah looga jawaabo. Madaxweynaha ayaa ugu baaqay Beesha Caalamka in ay ka qeyb qaataan gargaarka loo fidinayo dadka ay abaarahu saamaayeen si looga gaashaanto …
Madaxweynaha Puntland oo Maanta Xarigga ka jaray Xarunta keydka shidaalka Diyaaradaha (SAWIRRO)
February 28, 2017 – Madaxweynaha Puntland mudane, C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta magaalada Boosaaso ee xarunta Ganacsiga Puntland ka furay xarun Keydka Haamaha Shidaalka Diyaaradaha ee Garoonka Magaalada Boosaaso. Munaasabaddan Furitaanka Haamaha Keydka Shidaalka Diyaaradaha ee Garoonka Boosaaso ayaa waxaa ka soo qeyb galay Ganacsato, Madaxda gobolka Bari iyo sidoo kale quburo caalami ah. …
Madaxweyne Farmaajo oo Maanta Furay Shir Heer Caalami ah oo Looga Hadlayo Abaaraha Dalka Soomaaliya (SAWIRRO)
February 28, 2017 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta waxa uu magaalada Muqdisho ka furay shir heer caalami ah oo looga hadlayo abaaraha ka jira dalka Soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa ka soo qaybgalay xubno ka socday Beesha Caalamka iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka ka jira. Madaxweynaha Soomaaliya oo …
Qarax Gaari oo Goordhow ka dhacay Degmeda Xamer Jajab ee Magaalada Muqdisho (VIDEO)
February 28, 2017 – Waxaa goordhaw magaalada Muqdisho ka dhacay qarax gaari, qaraxani ayaa ka dhacay agagaarka Buundada Degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir, qaraxa ayaa waxaa ku waxyeeloobay nin shacab ahaa oo gaariga wadey. Baabuurka maanta qarxay ayaa nuuciisu lagu sheegay Tayota Harrier, gaarigani ayaa waxa uu qarxay xili uu marayay agagaarka buundada gaar ahaan halka …
Madaxweyne Farmaajo oo Magacaabay Lataliyihiisa Dhanka Arimaha Bulshada (Akhriso)
February 28, 2017 – Madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyada federaalka ee Soomaaliya mudane, Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa magacaabay xilka la taliyihiisa dhanka arimaha Bulshada, sida ay ku qornayd digreeto ka soo baxday xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya. Haweeneeydan oo lagu magacaabo Caasho Abokar Qaasim, ayaa dikreetada lagu sheegay inay qibrad durugsan u leedahay howlaha arimaha bulshada.
Ra’isul Wasaare Khayre oo Lagu Wado in Maalita Beri ah la Horgeeyo Baarlamaanka Federaalka (VIDEO)
February 28, 2017 – Ra’isul Wasaaraha magacaaban ee Soomaaliya mudane, Xasan Cali Kheyre ayaa lagu wadaa in maalinta beri ah la horgeeyo xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya si ay codka kalsoonida u siiyaan. Sida aan Wararka ku heleyno Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa aad u taageersan siyaasada R/Wasaaraha cusub ee Soomaaliya, waxaana beri la filayaa in si buuxda …
Qarxii Maanta ee Degmeda Xamer Jajab (VIDEO)
Baabuurka maanta qarxay ayaa nuuciisu lagu sheegay Tayota Harrier, gaarigani ayaa waxa uu qarxay xili uu marayay agagaarka buundada gaar ahaan halka loo yaqaan Unicef, waxaana qaraxan ku dhintay darawalkii gaariag waday oo kaligiis ahaa. Maalintii shalay ayay ahayd markii Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka uu xildhibaanada Golaha Shacabka ugu baaqay in 1-da Maarso-2017 laga doonayaa dhamaantood …
Kheyre oo Hortagaya Baarlamaanka (VIDEO)
Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa aad u taageersan siyaasadda R/Wasaaraha cusub ee Soomaaliya, waxaana beri la filayaa in si buuxda u siiyaan codka kalsoonida marka uu Madaxweynaha horkeeno baarlamaanka. Maalintii shalay ayay ahayd markii Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka uu xildhibaanada Golaha Shacabka ugu baaqay in 1-da Maarso-2017 laga doonayaa dhamaantood iney yimaadaan xarunta Golaha Shacabka, saacadda marka ay …
Puntland oo Sheegtay inay Maxkamadeynayso Nabaddoon Cabdiqaadir Axmed Xarrago (Dhagayso)
February 28, 2017 – Maamulka Puntland ayaa markii u horeysay shaaciyay inay dhawaan maxkamadayndoonaan Nabadoon ay ku ee deeyeen inuu ka beensheegay dhalinyaro la jirdilay iyo arimo kale. Taliyaha Ciidanka Booliska Puntland Cabdiqaadir Faarax Shire oo la hadlay Warbaahinta ayaa shaaciyay in dhawaan Maxkamad lasoo taagi doono Nabaddoon Cabdiqaadir Axmed Xarrago oo hadda ku xiran …